Football Khabar » मेस्सीद्वारा वर्ष २०१९ को सुखद् बिदाइ : पूरा भयो ५० गोल !
मेस्सीद्वारा वर्ष २०१९ को सुखद् बिदाइ : पूरा भयो ५० गोल !
स्पेनिस बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीले वर्ष २०१९ लाई सखद् तरिकाले बिदाइ गरेका छन् । उनले वर्षको अन्तिम खेलमा गोल गर्दै २०१९ को खातामा ५० लेखाउन सफल भए । शनिबार ला लिगाअन्तर्गत १८औं साताको खेल घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा खेल्नेक्रममा मेस्सीले पाहुना टोली अलाभेसविरुद्ध गोल गरेका थिए, जुन उनका लागि यस वर्षको ५०औं गोल थियो । मेस्सीले खेलको ६९औं मिनेटमा लुइस स्वारेजको पासमा शानदार गोल गरेका थिए ।
मेस्सीले वर्ष २०१९ मा क्लब र देशका लागि गरी कूल ५० गोलको कोसेढुंगा पूरा गरेका हुन् । यससँगै ३२ वर्षका मेस्सीले आफ्नो करिअर दौरान दशौंपटक एकै वर्षमा ५० गोल पूरा गरेका छन् । यस वर्ष मेस्सीले कूल ५८ खेलबाट ५० गोल पूरा गरेका हुन् । जसमा उनले अर्जेन्टिनाका लागि ५ गोल गरे भने बार्सिलोनाका लागि ४५ गोल गरे ।
प्रकाशित मिति ५ पुष २०७६, शनिबार २२:४२